एमाले र माओवादीकेन्द्र बीच फेरी एकता ! यस्तो छ तयारी – सत्य तथ्य र निष्पक्ष्य समाचारको लागि
एमाले र माओवादीकेन्द्र बीच फेरी एकता ! यस्तो छ तयारी
काठमाडौं – नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेसंग पुनः पार्टी एकताको प्रस्ताव गरेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले बरिस्ठ नेता माधव नेपाललगायत चार नेतालाई निलम्बन फुकुवाको निर्णय गरेर एमालेलाई २०७५ साल जेठ २ गतेकै अवस्थाबाट अगाडि लैजान सहमति जनाएपछि प्रचण्डले ओलीलाई फोन गरेर पुनः एकताको प्रस्ताव गरेका हुन् ।
फोनमा प्रचण्डले ओलीलाई भनेका छन् ‘तपाईंले त निलम्बन फुकुवा गर्नुभएछ, कारबाही फुकुवा गर्नुभएछ, तपाईं कारबाही फुकुवा गर्ने खालको मानिस त होइन किन यसो गर्नुभयो ?’ भनेर जिज्ञासा राखेका थिए।
पुनः एकताकै रूपमा पार्टीलाई अगाडि बढाउने प्रचण्डको प्रस्तावको जबाफमा ओलीले ‘म अहिले यतै लागेको छु, भदौ २६ वा अन्य धेरैतिर फर्कनु छ, त्यो कुरा पछि नै विचार गरौंला’ भनेर फोन राखेका थिए। शाभार कम्प्याक न्युज डटकमा
Tags: एमाले र माओवादीकेन्द्र बीच फेरी एकता ! यस्तो छ तयारी
Previous स्वास्थ्य प्रणालीमा केही समस्या देखिएका होलान्, ‘कोल्याप्स’ भएको छैन: प्रधानमन्त्री
Next स्मार्ट शहरको गुरुयोजना मन्त्रिपरिषद लगिंदै, घर बनाउन रोक लाग्न सक्ने